Sunday December 05, 2021 - 00:24:54 in Wararka by Xarunta Dhexe
(Somaliska) Hay'adda kormeerka dugsiyada ayaa maanta oo Khamiis ah ku dhawaaqday in ay go'aansatay in ay xirto dugsiga madaxa-banaan ee Kunskapsljuset ee magaalada Norrköping, kaasoo ay gacanta ku hayso ururka Al-Noor Islamic Associati
(Somaliska) Hay'adda kormeerka dugsiyada ayaa maanta oo Khamiis ah ku dhawaaqday in ay go'aansatay in ay xirto dugsiga madaxa-banaan ee Kunskapsljuset ee magaalada Norrköping, kaasoo ay gacanta ku hayso ururka Al-Noor Islamic Association.
Kormeerku wuxuu ku sheegay war-saxaafadeedka in "lahaanshaha iyo maamulku aanay ku habboonayn qabashada hawlo waxbarasho.”
Go’aanku wuxuu dhaqan galayaa laga bilaabo Janaayo 7, 2022, wuxuuna saameeyaa 103 arday.
Go’aanka kormeeraha dugsigu wuxuu ku salaysan yahay ” Falal halis ah oo dhacay sannadihii u dambeeyay ee la xidhiidha xisaabinta maaliyadeed ee ururka.” Sida laga soo xigtay SVT.
"Waxaan sameynay waxa aan ugu yeerno lahaanshaha iyo dib u eegista maamulka,” Baaraha Arvid Brugreen ayaa yiri. Waxa la ogaaday in maamulku aanu samayn wax lacag xisaabeed ah inta badan sannadihii 2018 iyo 2019, taas oo keentay in la soo saaro laba xukun oo ku saabsan dembiyada maaliyadeed iyo ganaaxyada shirkadda.
Ururku wuxuu xaq u leeyahay inuu rafcaan ka qaato go’aanka xidhitaanka maxkamada hortiisa, laakiin go’aanka waxaa loo arkaa mid ansax ah ilaa xukunka maxkamada laga soo saaro.
Dugsiga madaxa banaan ee Kunskapsljuset waxa uu ku yaalaa degmada Hageby ee Norrköping waxana uu leeyahay arday dhigata dugsiyada fasalada 1 iyo 6aad